Kukuthini ukugxothwa, izizathu, ukuba zisebenza njani kunye nembuyekezo | Ezezimali
Ukuba nomsebenzi akuthethi ukuba awunakugxothwa nangaliphi na ixesha lonyaka. Ngapha koko, kufanele ukuba kubekho unobangela kunye nesaziso ukuze, kwixesha elifutshane, uyeke ekuqeshweni uye kokungasebenzi. Kwaye elinye lala manani yinto ekuthiwa kukugxothwa.
Kodwa,Kukuthini ukugxothwa? Zeziphi izizathu ezinokunikwa ukuze yenzeke? Kwaye yintoni imbuyekezo onayo? Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nolu hlobo lokugxothwa kwelinye icala ngumqeshi, siza kuthetha ngalo.
1 Kukuthini ukugxothwa
2 Yintoni unobangela wokugxothwa
4 Yeyiphi imbuyekezo evelisayo
5 Ngaba ukugxothwa ngenjongo kunokuchazwa njengokungenabulungisa okanye ukungasebenzi?
Inqaku lama-52 loMthetho wabasebenzi usixelela malunga Ukupheliswa kwesivumelwano ngenxa yezizathu ezizizo, uxhobisa umqeshi ukuba agxothe umqeshwa xa athe wazifumana nakwesiphi na sezizathu ezidweliswe kweli nqaku. Kwaye ngokudibeneyo, oko kukuthi, ngesigqibo sabo, ngaphandle komsebenzi, ngelo xesha, bekwazi ukwala.
Ewe unokukugxeka ukugxothwa kwakho, kwaye iya kuba ngumgwebi ogqiba ukuba bekufanelekile okanye, ngokuchaseneyo, akunantsingiselo okanye akunasiseko.
Ngamafutshane, sinokuchaza ukugxothwa ngenjongo yokuba umqeshi angazimela ukuze agxothe abasebenzi abasebenzisa kakubi ukholo lwabo oluhle kwaye bangawenzi umsebenzi ngokufanelekileyo kwaye ngokusekwe koko kusekwe kuMmiselo wabasebenzi.
Akukho xesha ekucingelwa ukuba umqeshi uya kusebenza ngokungathembeki ukunyanzelisa eli nani labasebenzi, kodwa sisixhobo onokuthi ngawo ulawule imithombo yoluntu onayo.
Yintoni unobangela wokugxothwa
Njengoko kuchaziwe kwinqaku lama-52 le-ET, izizathu zokuba inkampani inokugxotha umsebenzi ngoku:
Ngenxa yokungabikho komsebenzi. Nokuba oku kuyaziwa okanye kwenzeka emva kokusayina ikhontrakthi yengqesho.
Ukusilela kokuziqhelanisa nomsebenzi. Ngokucacileyo, inkampani kufuneka inike ixesha lokuziqhelanisa nomsebenzi; kwaye ikunike lonke uqeqesho olufanelekileyo lokufunda ukulawula imisebenzi yakho. Kodwa ukuba ayikaguquki, umqeshi unikwe amandla okuphelisa ubudlelwane bengqesho.
Ngenxa yezizathu eziboniswe kwinqaku 51.1 le-ET. Sithetha ngoqoqosho, umbutho, imveliso okanye izizathu zobugcisa. Zonke zichaziwe kwinqaku, kodwa ibhekisa ngaphezu kwako konke kwinkampani, nokuba kungenxa yemveliso, kuba kukho iingxaki kwezoqoqosho, kufuneka abasebenzi abambalwa, njl.
Umthwalo ongonelanga wesivumelwano. Kule meko, ibhekisa ekutyikityweni kwesivumelwano esenziwe ngezemali nguRhulumente. Kuphela kuxa abasebenzi benziwe ngokusesikweni ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo, kwaye banesivumelwano esingapheliyo, apho kungasetyenziswa inani lokugxothwa.
Ukuze umqeshi, okanye inkampani, isebenzise ukugxothwa ngenjongo kubudlelwane bengqesho, kuyimfuneko ukuba inkqubo qala ngeleta ebhaliweyo yokugxothwa.
Kuya kufuneka ichaze ukuba yintoni unobangela ogunyazisa ukugxothwa, kunye namaxwebhu ayimfuneko omsebenzi ukuze ahlole ukusebenza kwenkampani.
Ukongeza ekugxothweni, Umsebenzi uya kufumana imbuyekezo ehambelana nexesha alichithe emsebenzini.
Ukuba umsebenzi akavumelani nesi sigqibo, unokutyikitya isaziso sokupheliswa "ngokungathobeli" kwaye aqaphele umhla. Ukusukela ngalo mzuzu uye phambili, uneentsuku ezingama-20 zeshishini ukubanga inani lokuvota.
Le leta yokugxothwa kufuneka isiwe kwi-ofisi yengqesho, i-SEPE, kuba lelinye lamaxwebhu abazakucela ukuqhubekeka nesibonelelo sokungaphangeli, kwimeko apho banelungelo lokuyifumana. Ngoku, ukuba umsebenzi akazonwabelanga iiholide, iintsuku ezilindileyo, njl. Kuya kufuneka ulinde ukuba ezo ntsuku zihlawulwe (kunye nomqeshi azicaphulele) ukuze afake isicelo sokungabikho kwemisebenzi.
Ukugxothwa kwenjongo akuqalisi ukusebenza kwangoko, kodwa kufanele kubekho isaziso seentsuku ezili-15, ixesha apho umsebenzi ngokwakhe eneeyure ezi-6 zekhefu elihlawulelwayo ngeveki ukubenza befuna umsebenzi omtsha. Oko kukuthi, xa sele sizisiwe isizathu, umsebenzi uya kuqhubeka esebenza ezinye iintsuku ezili-15, kodwa iiyure ezi-6 ngeveki azizukuya emsebenzini, nangona beza kuhlawuliswa, kuba ezo yure zisetyenziselwa ukukhangela umsebenzi omtsha.
Yeyiphi imbuyekezo evelisayo
Yonke into egxothiweyo inelungelo kwimbuyekezo. Ngoku, sinokufumana iingcinga ezimbini ezahlukeneyo.
Ngokubanzi, kwaye ngokuxhomekeka ekubeni ukugxothwa ngenjongo kufanelekile, oko kukuthi, ukuba umthetho uthotyelwe, umsebenzi uya kuba nelungelo ukufumana iintsuku ezingama-20 zomvuzo ngonyaka osetyenziweyo. Ewe kunjalo, kukho ubuninzi beentlawulo zenyanga ezili-12.
Ukuba umsebenzi ubanga kwaye ukugxothwa ngenjongo kuthathwa njengokungemkeleki, emva koko zinikwa ezinye iindlela ezimbini kumqeshi: o mbuyisele emsebenzini, umhlawule umvuzo angazange awufumane ukusukela ngexesha lokugxothwa kwakhe; okanye uhlawule imbuyekezo, ayizukusebenza iintsuku ezingama-20 ngonyaka, kodwa iyakusebenza iintsuku ezingama-45/33 ngonyaka.
Ngaba ukugxothwa ngenjongo kunokuchazwa njengokungenabulungisa okanye ukungasebenzi?
Inyani yile ewe. Kwaye ezona zizathu ziphambili zokuba yenzeke, ekwayinto yesiqhelo, kukuba inkampani ngokwayo, kwisaziso sokugxothwa, ayizichazi izizathu zokuba igxothiwe. Ukuba oko kuyenzeka, Umsebenzi unelungelo lokungavumelani nesigqibo kwaye axele imeko ukuze umntu wesithathu akwazi ukuhlalutya imeko kwaye ujonge ukuba inkampani inikezela na ngamaxwebhu ayimfuneko ukwenza ukugxothwa kusebenze.
Ngaphandle koko, umsebenzi uya kufumana imbuyekezo (okanye abuyele emsebenzini wakhe).
Ngaphakathi kweentlobo zokugxothwa, ukugxothwa ngenjongo yeyona nto ingaziwayo, kodwa ikhona, kwaye iinkampani ezininzi, xa zibona ukuba azinakuqhubeka nemeko, ziyisebenzisele ukuphelisa ubudlelwane bengqesho. Ubumazi? Ngaba wakha wayifumana kubudlelwane bakho bomsebenzi? Khawusixelele ngetyala lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Kukuthini ukugxothwa